Cabbirka Cadaadiska Wareegyada Wareegga ee Meesha beddeli kara iyo Sifonnada
by admin 21-06-05
cippe (Shiinaha Caalamiga ah ee Batroolka & Bandhiga Tiknoolajiyada Batroolka iyo Qalabka) waa munaasabad sanadle ah oo hormuud u ah warshadaha saliidda & gaaska, oo sanad walba lagu qabto Beijing. Waa goob weyn oo loogu talagalay isku xirka ganacsiga, soo bandhigida tignoolajiyada horumarsan, isku dhaca iyo is dhexgalka ne...
by admin 21-05-13
Qaybaha SEMICON Europa Laga soo bilaabo silikon ilaa nidaamka, SEMICON Europa waxa la daboolay semiconductors. Iyo halka SEMICON Europa ay tahay dhacdada sanadlaha ah ee ugu sareysa warshadaha semiconductor-ka Yurub, SEMICON Europa sidoo kale waa bandhig loogu talagalay qaybaha tignoolajiyada ee koraya iyo kuwa soo baxaya oo ay ku jiraan MEMS, 3D IC, pri...
Waxaa lagu qabtaa iyada oo uu garwadeen ka yahay Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Madaxweynaha Isutagga Imaaraadka Carabta, Bandhigga iyo Shirka Caalamiga ah ee Batroolka Abu Dhabi (ADIPEC), wuxuu dhacayaa 7-10 November 2016 Abu Dhabi, UAE.
by admin 21-05-08
OTC waxay ku siinaysaa marin u helka macluumaadka farsamada ugu horeeya, bandhiga qalabka ugu wayn ee warshadaha, iyo xidhiidho xirfadle oo cusub oo qiimo leh oo aduunka oo dhan ah. Ka-qaybgalkeeda caalamiga ah ee ballaaran wuxuu bixiyaa fursado aad u wanaagsan wadaagga caalamiga ah ee tignoolajiyada, khibradda, alaabta ...